Sida Loo Shaaciyo / Iska Ilaaliyo Auto-Cusub ee iPhone / iPad
IPad Tilmaamaha & Tababarada
Auto-Correct wuxuu noqon karaa muuqaal weyn, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid aad u jahwareer leh. Dhammaanteen waxaan ku soo aragnay email ama fariin qoraal ah oo keliya si aan u akhristo ereyada iyo qashinka lagu dhejiyo ereyada ka dib markii baabuurtu ay gacanta ku soo dhigtay, ama ka sii xumaatay, waxaan qabannaa ka dib markii aan dirno farriinta.
Laakiin waxaa hubaal ah inay jiraan waxyaabo fiican oo aad sameyn kartid si toos ah. Tusaale ahaan, mid ka mid ah gaabnaanta gaabinta keyboard waa inaad ka boodisid qorista xanjo ee foosha sida "ma awoodi karo" ama "ma'aha" iyo u ogolow Auto Correct in aad adiga kuu soo geliso. Dabcan, haddii aadan ku qorin foosha badan , wakhtiga la keydiyay waxaa laga yaabaa inaanay u qalmin niyadjab ku lug leh.
Sidee loo leexiyaa baabuurka tooska ah ama furan
Tallaabada ugu horreysa waa in aad gashaa iPad-kaaga adoo isticmaalaya astaanta u muuqda sida dareen-celinta. ( Baro sida loo furo iPad-ka .)
Marka xigta, dooro "Guud" ka soo socda bidixda bidixda.
Furo kumbuyuutarrada adigoo hoos u riixaya ilaa aad aragto xulashada "Keyboard" oo aad ku soo gasho.
Goobta Awood-Dhigashada waxay ka hooseysaa Awood-Furashada. Si fudud u taabo xajiyaha si aad u jeediso.
Sidee si toos ah u saxdaa iyadoo baabuurtiisa dib loo hagaajiyo
Ma rabtaa in aad haysato keeggaaga oo aad cuntid? Haddii aad heshid saxitaanka saxda ah ee saxda ah, laakiin mararka qaar waxtar leh, weli waad isticmaali kartaa adiga oo aan si toos ah u saxeexin calaamadahaaga marka aad qoraysid. Badbaadada, jeegareynta higgaadinta waxaa loo bedelay iPadkaaga ama iPadkaaga. Ilaa inta ay ku sii socoto, waxaad ku xiri kartaa ereyo kasta oo khaladka leh si aad u aragto menu-pop-up oo leh saddex doorasho oo sax ah oo la saxo farsamada.
Tani waxay ka dhigan tahay inaad fariin fariin ka dibna aad dib ugu noqotid ereyada qaldan oo aad si deg deg ah ugu beddesho hingada saxda ah. Ma aha inaad ka welwelisid niyadjabka telefoonkaaga ama kaniinigaada oo ka fakaraya in ay ka fiicantahay adiga.
Waxa kale oo aad bixin kartaa taxadar leh calaamad saadaalin ah, taas oo sidoo kale u muuqda mid default ah oo lagu qeexay isla goobaha kumbuyuutarka. Calaamad saadaalin ah ayaa soo jeedinaysa ereyada marka aad qoraysid. Haddii aad ku qorto erey dhaadheer, isha lagu hayo saadaalinta sare ee kumbuyuutarka waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho hal saxeex si aad u dhammaystirto ereyga.
Talooyin badan oo Mawjada ah ee loogu talagalay Your iPhone iyo iPad
IPhone iyo iPad waxay leeyihiin farshaxan dheeraad ah oo ay kor u xirtaan oo kaliya kaliya auto-sax ah. Tusaale ahaan, ma ogtahay inaad si dhakhso ah ugu dhejin kartid lambarada iPad-ka adigoo u beddelaya nambarada kumbuyuutarka? Waxaa sidoo kale jira trackpad casri ah oo kuu ogolaanaya inaad si toos ah u dhajiso cursor marka la qorayo qoraalka . Yaa u baahan miisaan markaad haysato tigidh-dheelitire?
Waxaad ka heli kartaa trackpad-ga ah ee iPad-ka adigoo haysta laba farood oo hoos u riixaya kumbuyuutarka. Tani waxay furi doontaa furayaasha oo waxay kuu ogolaaneysaa inaad farahaaga u wareejiso si aad udhaqaajiso calaamadda. Haddii iPhone aad taageerto 3D Touch, oo lagu soo bandhigay iPhone 6S, waxaad foorarsan kartaa farta kaliya ee shaashadda sida kumbuyuutarku uu ahaa badhanka si loo kiciyo trackpad virtual ah.
Haddii aad leedahay iPad, waxaa laga yaabaa inaad aragtay lambarada iyo calaamadaha gaarka ah ee tusaya waraaqaha ku qoran kumbuyuutarka. Waxaad awoodi kartaa inaad tirtirto tirooyinkan iyo jilayaasha adiga oo furaya furaha oo farahaaga hoos u riixaya.
Codka Voice ayaa laga yaabaa inay noqoto mid kooban . Kaliya garaac furaha furaha iyo Siri ayaa codkaaga kuugu qori doona qorista. Talo: Si aad u geliso jumlad ama wakhti, waxaad dhahdaa ereyada "comma" ama "period".
Waxaad sidoo kale bedeli kartaa kumbuyuutarka gabi ahaanba. Google wuxuu leeyahay barnaamij kumbuyuutar oo leh qaab muuqaalka Google ah, Swype wuxuu kuu ogolaanayaa inaad fartaada ku fariisato furayaasha halkii aad ka deyn laheyd, taas oo dadka qaar ay doorbidaan casriga iyo kiniinnada. Baro sida loo isticmaalo kumbuyuutarka caadiga ah qalabkaaga .
Barnaamijka ugu wanaagsan ee iPad-ka ee Dhibaatada Autism-ka
Sida Loo Isticmaalayo iPadkaaga Roland Integra-7
3 Siyaabaha Loo Beddelayo iPadkaaga
Sida Loo Bilaabo iPad-kaaga
Taageerada iPadka ma taageersan yihiin?
Sida Loo-qaabilo Naftaada Noloshaada iPad
Sida Loo Qabto iPad Si Sax ah
Sida Barashada Piano ee iPad-kaaga Baro
Sida loo wadaago Sawirrada, Website-yada, iyo Dukumentiyada iPad-ka
Sida Looga Ilaaliyo iPad-kaaga Laga Sameeyo Cudurrada iyo Ciladaha
Lenovo Essential H535 Dib u eegista PC-ga
Sida Looga Horumariyo Naftaada Laga Soo Qabto Weerarka
HELIOS Waxay ka caawisaa Diyaarinta PlayStation 3 (PS3) hal Linux Server
Maxaa loola jeedaa OTW?
Maxay Tahay File BM2?
La daabacay bogga Sawirka Sawirka Sawirka
Baro Habka ugu fudud ee Lagu Bedeli karo Yahoo Mail Classic
Sida loo xiro Keybelayaasha cusub ee iPhone
Sida loo soo celiyo NTLDR iyo Ntdetect.com Laga bilaabo Windows XP CD
Embed YouTube Videos ee PowerPoint 2010
Dhibaatooyinka Dhageysiga Farsameysan ee aan Shaqeyn Karin
Sidee looga fogaadaa Download Badbaadinta Badbaadada
Dib-u-eegista Iskuduwaha - sida Pokemon for Dad Busy
DSL iyo Kabtanka: Isbarbardhigga Isgaadhsiinta Internetka ee Broadband
Sida Loogu Soo Celiyo ama Loogu Geeyo Khadkaaga Gmail ee CSV-ga
Barnaamijka Wicitaanka Wicitaanka Wanaagsan
Qalabka Nabadgalyada Bilaash ah
EaseUS Todo Backup Free v10.6
Vizio E420i Smart LED / LCD TV - Sawirro
10 Qalabka Best ee isku-dhafka Podcast-aad boggaaga WordPress